Zụta Bitcoin na Cash App | Paxful
Etu esi Azụta Bitcoin na Cash App
Cash App bụ akpa ego ịntanetị na ngwa ịkwụ ụgwọ na enyere gị aka izipu ma nata ego nye ndị ezinụlọ na ndị enyi gị. Ọ na enyere gị aka ịnabata ọkwụkwụụgwọ ekwentị na kaadị maka azụmahịa gị ma nyefee ego na akaụntụ akụ gị.
Na ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ na Paxful, ị nwere ike ịzụta Bitcoin ugbu a na Cash App. Naanị soro usoro ndị a iji nweta BTC gị:
Banye na Paxful - Banye na akaụntụ Paxful gị ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. Ị banye na Paxful na eme ka ị nweta akpa ego Bitcoin n’enyeghị ego ọzọ.
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ gị - Họrọ Cash App dị ka usoro ọkwụkwụụgwọ iji weta ndepụta nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa niile na anabata usoro ọkwụkwụụgwọ a. I nwekwara ike tinye ego ị dị njikere imepụta iji wepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa na enweghị njikọ. Chọrọ ịma ego ole na Bitcoin ị ga enweta? Nwaa Ihe mgbakọ Bitcoin anyi.
Chọta ezigbo ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa - Chọgharịa na ndepụta nke ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ma hụ na ị mere nyocha ndabere. Tụlee nnweta, aha ọma, akụkọ azụmahịa nke òreè, na ihe ndị ọzọ dị otú ahụ. Ozugbo ịchọtara ezigbo ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa nke yiri ka afọ ojuju, nyochaa usoro nke onye na ere ahịa nke ọma tupu ịmalite azụmaahịa ahụ.
Nabata usoro ma bido ahia - Mgbe ị na eji Cash App azụta Bitcoin, kwadebe $Cashtag gị na akaebe nke ịkwụ ụgwọ iji hụ na azụmahịa dị mma. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwekwara ike ịchọ ka ị nyefee otu kaadị ID gị yana akwụkwọ ndị ọzọ iji nyochaa njirimara gị. Ya mere, jikere maka ụdị arịrịọ ndị ahụ. Ozugbo ahia ahụ malitere, soro ntuziaka ndị sitere n'aka onye na ere ahịa. Rịba ama na Paxful na arụ ọrụ escrow nke na ejide Bitcoin onye na ere ahịa ruo mgbe azụmahịa ahụ gwụchara iji chebe gị pụọ na aghụghọ. Ozugbo ahia ahụ mechara nke ọma, ị ga enweta Bitcoin ozugbo na akpa ego Paxful gi.
N'ebe a na Paxful, anyị na eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mma iji zụta BTC na Cash App. Iji mụtakwuo banyere ịzụta Bitcoin n'elu platfọmu anyị, nweere onwe gị ịlele anyị ihe ọmụma anyị nwere ma ọ bụ gbadoro ndị otu na-akwado anyị.